Zụta Bitcoin na Bolivia | Paxful
Zụta Bitcoin ozugbo na Bolivia
Otu n'ime ahịa ndị ọgbọ ònye Bitcoin kachasị na ụwa nọ na Bolivia ugbu a! Gbanwee Boliviano gị (BOB) ngwa ngwa n'ime BTC iji ihe karịrị nhọrọ ịkwụ ụgwọ 300 dị n'elu platfọmu. Nhọrọ gị gụnyere PayU, Mercado Pago, Western Union, Nyefee International Waya (SWIFT), Skrill, PayPal, kaadị onyinye, nnyefe ego na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịzụta Bitcoin site na ọtụtụ puku ndị ahịa n'ime na n'èzí Bolivian. Iji mee ka ahụmịhe azụmaahịa gị baa uru ma nwee ntụkwasị obi, Paxful na echekwa ego gị site na onyinye ikikere ihu-abụọ (2FA), nchekwa larịị n'elu platfọmu ya, ma chọọ nchoputaeziokwu akaụntụ n'aka ndị na ere ya niile.
Bido njem Bitcoin gị site na ịmepụta akaụntụ Paxful gị ma ọ bụrụ na i mebeghị. Ị ga enweta akpa ego Bitcoin ozugbo ị debanyere aha iji mee ka gị na aga n'ihu. Ị banye na obodo crypto na apụta na ụwa adịtụbeghị mfe. Ezi azụmaahịa!
Ebumnobi orire na ozuzu ahịa dị elu maka Bolivian Boliviano na Bolivia
Ahụla minit 1 ago Nyefe Ụlọakụ — Mercantil Santa Cruz
500.00-7,800.00 BOB 500.00 BOB $0.83 Zụta 177,397.70 BOB Zụta Zụta
103.00-631.00 BOB 103.00 BOB $0.83 Zụta 177,397.70 BOB Zụta Zụta
Ahụla minit 1 ago PayPal — goods and service
344.00-1,378.00 BOB 344.00 BOB $0.67 Zụta 221,747.12 BOB Zụta Zụta
Ahụla minit 1 ago Kaadị Ikwụ ụgwọ /Akwụmụgwọ — released right away
342.00-1,371.00 BOB 342.00 BOB $0.67 Zụta 221,747.12 BOB Zụta Zụta
Usoro ọkwụkwụụgwọ dị elu na Bolivia
Nyere ndị ọzọ aka na Bolivia inweta Bitcoin maa ịnwere ike irite NNUKWU uru ruo 60% na azụchaa ahịa ọ bụla. Bido iji akaụntụ ụlọakụ mpaghara ere ihe ugbu a, lee ntuziaka anyị n’efu. Paxful na enweta ndị na azụta Bitcoin karị 1000 site na Bolivia kwa ụbọchị.
Imaara ọtụtụ ndị chọrọ ịzụ Bitcoin na Bolivia? Site na Obere ụlọahịa Bitcoin na Gbakwụnye Programụ ị na enweta 2% na azụmaahịa ọ bụla ruo mgbe ebighi ebi site na ịkekọrịta njikọ. Bido ugbu a.